Midlalo Ukutya Ukulahlekelwa ngumzimba Monodiettes
Ukutya okusekelwe ekusetyenzisweni kwemveliso eyodwa kuthiwa yi-mono-diet. Icandelo elihle lokutya kukuba iiveki umntu angalahlekelwa malunga neekhilogram ezi-4. Kodwa indlela yokugcina ubunzima emva kokutya kwe-mono-nentsingiselo inomdla kumbalwa.
Kungcono ukusebenzisa imono-yokutya
Ngokutsho kwabantu abaninzi, i-mono-yokutya ilungele amadoda, ekubeni ibhinqa linokuyilwa. Ekugqibeleni isiphumo, umfazi akanakunciphisa umzimba, kodwa uzuze. Kubalulekile ukwazi ukuba le ndlela yokutya isetyenziswe iintsuku ezingama-3-4, kungekho kwakhona, ngaphandle koko isisindo emva kokutya siya kukhawuleza kwaye awuyi kubona umphumo. Oogqirha bacebisa abaphengululi basebenzi basebenzisa le ndlela yokutya kanye ngenyanga, ubuninzi beebini, ukugcina ubunzima bezinto eziqhelekileyo.
Yintoni enokuyenza ukuze kugcinwe umphumo emva kwe-mono-diet
Ukugcina emva kwe-mono-yokutya isisindo sakho siya kuncedwa ngendlela efanelekileyo yokuphuma kuyo. Xa uphuma kwi-mono-yokutya, kufuneka usebenzise imveliso eyayiyisiseko sokutya kwakho. Ngokomzekelo, ukuba usebenzisa i-buckwheat, qhubeka uwusebenzisa, kodwa ngelo xesha udibanise iimveliso ezingayi kukunika amakhilogremu angaphezulu. Inokuba yinto encinci yeebhunge, iklabishi, intlanzi, njl njl. Ukuba ungeze intlanzi kusasa, kunye neembotyi ezincinci ngokuhlwa, ngaphezu kwe-buckwheat, akusayi kuphazamisa kuphela umphumo, kodwa kuya kucebisa umzimba ngezinto ezinokusetyenziswa ixesha elichithwe ngokusetyenziswa kwemveliso enye. Kubalulekile ekuphumeni kokutya ukugcina ubunzima, ukusela amanzi. Thatha umzimba ngomhla kufuneka ungabi ngaphantsi kwama-1.5 ilitha ngosuku. Wonke umntu ofuna ukugcina ulutsha uyazi ngale nto. Amanzi athatyathwa ngetayi eluhlaza, enceda ukugcina ubunzima emva kokutya, kwaye kunceda ukukrazula umzimba wezinto ezahlukeneyo ezingadingekile.
Kwakhona, ukuze ugcine isisindo emva kokutya kwe-mono, umntu akayi kukulibala ngeentlobo ezahlukeneyo zeziqhamo, kodwa manani azinako ngokukhawuleza. Kwaye ukutya kufuneka kugcinwe, ngamanye amazwi, kufuneka utye ukutya kathathu ngosuku ngaphandle kokutya okungeziwe. Musa ukulibala malunga nokuzikhandla komzimba, kuba ngoncedo lwabo kulula ukugcina ubunzima kwimimiselo. Ukuzivocavoca umzimba - oku kuyingxenye yinkimbinkimbi yokugcina ubunzima emva kokutya. Kuhle kakhulu ukwenza ukufaneleka, ukudansa, i-aerobics. Emva koko, nangona udla okuncinci ngaphezu kokumiselweyo, ngoko xa wenza imidlalo yezemidlalo, uya kulahla iikhalori ezingaphezulu, njengoko ezi iklasi zitshisa amafutha. Kulungile kakhulu ukuya echibini, thabatha isitya esahlukileyo. Musa ukulibala ngokuhamba emoyeni omtsha. Ukuba ulandela ezi ngcebiso, oku kuya kunceda ukugcina isiphumo siphumelele emva kokutya kwe-mono.
Indlela yokuLawula ubukhulu kunye neLungu
Ukutya kwe-buckwheat: ukulahla ixesha elingaphezu kweeveki ezimbini
Ukutya kwe-Macaroni okanye indlela yokunciphisa umzimba ngokuncedisa i-pasta
I-Soy Diet: Imenyu yeveki
Ubisi bokunciphisa - ngaba luncedo okanye luyingozi?
I-Crispy "i-egg-sticks" esuka kwitshalo seqanda
U-Ksenia Sobchak wamisa uBilan noPugachev, ividiyo
Ukutya kwiityanti - ezilungileyo okanye ezimbi
Umhla wokuqala kunye nomfana: njani ukuziphatha?
Yintoni ebalulekileyo ukwazi ngeendawo zokupheka
Isaladi yeCranberry kunye neFeta ushizi kunye ne-millet
UMaxim Vitorgan uthetha ngomlingana wendodana encinane
Ziziphi iimpahla ezikhuthaza ukuzihlonela
Unyango lwehudo lomntwana, isifo somhlaza
Iindlela zokupheka ezibonakalisiweyo neziphumelelayo kunye neenkqubo eziqhelekileyo ezibandayo kunye ne-sinusitis kubantwana nakubantu abadala
Ungaziqonda njani kwaye uqonde oko ufuna
Uthando lo kuqala lokwenene luza nini?